गुगल कसरी बन्यो सर्च इन्जिनको बादशाह ? – Subas Niraula
Published by Subas Niraula on October 20, 2018
तपाइँलाई केही प्रश्नको जवाफ थाहा छैन वा कुनै द्विविधा छ वा कुनै विषयको बारेमा तपाइँलाई धेरै जानकारी चाहिएको छ भने के गर्नुहुन्छ ? धेरैको जवाफ हुन्छः गुगल गर्छु । गुगल अहिले हाम्रो दैनिक जिवनीको हिस्सा बनिसकेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले गुगललाई आफ्नो साथी तथा शिक्षक भन्दछन् । गुगल यहीँ हप्ता २० वर्षको भएको छ । यो दुई दशकको इतिहासमा गुगल इन्टरनेट जगतको बादशाह बन्न सफल भएको छ । गुगल भन्दा अघिपनि कैयन् सर्च इन्जिन थिए, जसको मानिसहरुले धेरै प्रयोग गर्दथे । तर गुगलको अगाडि कोहीपनि टिक्न सकेन । ४ सेप्टेम्बर १९९८ मा इन्जिनियर ल्यारी पेज र सर्गे ब्रिनले विश्वमा रहेका तथ्य तथ्यांक र जानकारीहरुलाई एक ठाउँमा समेट्नका लागि एउटा प्रोजेक्ट सुरु गरे । सोही प्रोजेक्ट यतिधेरै सफल भयो कि अहिले गुगलसँग हेरक दिन लाखौँ प्रश्न सोधिन्छन् । र, यसका संस्थापकहरु अहिले अरबौँका मालिक बनिसकेका छन् । गुगल भन्दा अघिपनि इन्टरनेटको दुनियामा केही सफल सर्च इन्जिन थिए । तीनको चर्चा गराैं
गुगल भन्दा अघिपनि सर्च इन्जिनहरु थिए र सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका थिए । तर आखिर त्यो के कारण थियो जसले गर्दा गुगल सबैलाई पछार्न सफल भयो ? इन्टरनेटमा गरिने ९० प्रतिशत सर्च गुगलमै हुन्छन् । झण्डै ६० प्रतिशत अनलाइन विज्ञापन पनि गुगलबाटै आउँछन् । हरेक प्रयोगकर्तालाई एक निजत्वको अनुभुति गराउने कोसिस तथा लगातार केही नयाँ गर्ने कोसिसका कारण गुगलले यो सफलता चुम्न सफल भएको हो । गुगलको एल्गोरिदमले पनि यसमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । गुगलका संस्थापक पेज तथा बि्रनले सन् १९९९ मा पेज र्यांक एल्गोरिदम ल्याएका थिए । यसले कुनैपनि वेबपेजलाई उपयोगिताको हिसाबले १ देखि १० को बीचमा श्रेणीकृत गर्दछ । गुगलको हेल्प साइटमा यसका सर्जकहरुले लेखेका छन् ः तपाइँलाई जवाफ चाहियो, लाखौँ वेबपेज होइन । हाम्रो सिस्टमको आवश्यकताका अनुसार नतिजा दिन्छ । तर पेज तथा बि्रनले केही शूत्र गोप्य राखेका छन्, जसले गुगललाई अरु सर्च इन्जिनभन्दा पृथक र उत्कृष्ट बनाएको छ । यसलाई गुगलले लगातार परिवर्तन गरिरहन्छ । सायद गुगलको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यो हो कि गुगल प्रयोगकर्ताको आवश्यकता बुझ्नमा सफल रहेको छ ।
Tags: google +google searchhow-does-google-became-the-king-of-search-enginethe king of search engine